Ku Dhiira-geli Naftaada Imtixaanada | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Muzamil Cabdi Cusmaan — September 1, 2018
Saaxiib ka mid ah saaxibadaa ayaa wuxuu doonayaa inuu qabto shaqo adag wuxuuna kaaga baahanyahay eray dhiira-galin ah. Maxaad ku kudhihi lahayd qofkaas? Isla sidaas oo kale ki dheh naftaaada. Isku soo xir qol lana hadal naftaada. Ku dheh naftaada; waan samayn karaa. Waan aaminsanahay dhab ahaan ayaan u aaminsanahay — waan samayn karaa, waan samayn doonaa.
Samee muuqaal qofeed oo buuxsan. Qor erayga ” IMTIXAAN” oo xarfo waa wayn ah, kuna dhaji xabadka muuqaalka la buuxiyey. Kasoo lalmi saqafka qolka adigoo isticmaalaya xarig.
Ku biloow feer adigoo beerka ka garaacaya ilaa uu cad cad u kala firdhado. U dabaal orodna kusoo wareeg qolka dhexdiisa sida uu sameeyo ciyaarigahanka Mo-Salah markii uu goolka ku hubsado shabaqa.
Adigu hadda gacmahaaga ayaad imtixaankii cad-cad ugu jar-jartay.
Markaad ka baxdid qolkaas oo aad u fariisatid warqadaha imtixaanka, waxay kaa baryi doonaan inaad u naxariisato waliba ayagoo jilba jansan, oo masaakiin ah.
Qoraalo kale halkaan kasii aqriso:
Tags: Ku Dhiira-geli Naftaada Imtixaanada
Next post Marna Ha-Aqbalin Guuldaro
Previous post Maskaxdaadu Waa Hantida Ugu Fiican Ee aad Haysato